warkii.com » XOG: Khilaaf ka taagan cida guddoomineysa shirka Dh/mareeb & Go&rsquo;aanka Villa Somalia
XOG: Khilaaf ka taagan cida guddoomineysa shirka Dh/mareeb & Go&rsquo;aanka Villa Somalia
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo uu guddoomin doono shirka wadatashiga Dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada,kaas oo ka furmaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Warkan ayaa lagu shaaciyay war ay madaxtooyada ka soo saartay tegitaanka madaxweyne Farmaajo ee Dhuusamareeb oo ku timid baaq ay ugu yeereen Dowlad goboleedyada oo halkaas ku shiray 11-12-july 2020.
Agendaha shirka Dhuusamareeb looga hadlayo ayaa waxay yihiin hannaanka geedi socodka siyaasadeed iyo amni ee dalka, qabsoomida doorasho waafaqsan dastuurka sharciga doorashooyinka iyo xeerka dalka.
Sidoo kale, wararka shirka la xiriira ayaa sheegaya in suurta gal tahay in magaalada Dhuusamareeb lagu xaliyo khilaafka mudada ragaadiyay qaar ka mid ah Dowlad goboleedyada iyo Federaalka,kaas oo salka ku hayo arrimaha dastuurka dalka.
Madaxweynaha Galmudug ee Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor oo ah mas’uulka martida loo yahay ayaa ku adkeysanaya guddoominta shirka Dhuusamareeb.
Wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo oo uu qeyb ka yahay Ra’iisal wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo matalayo Somaliland ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb,kuwaas oo si weyn halkaas loogu soo dhoweeyay.